Ndị Bridgertons - Oge abụọ Ekwenyela | Bezzia
Ndị Bridgerton: Oge Abụọ Abụọ Ejirila!
Susana godoy | 27/04/2021 14:00 | Akụkọ
Ndị Bridgerton abụwo otu n'ime nnukwu ihe ịga nke ọma iji mechie afọ 2020. Oge izizi malitere na ekeresimesi nke afọ ahụ e kwuru na mbụ, ọnwa ole na ole gachara, ndị mmadụ ka na-ekwu maka nkata ahụ na isi okwu ya. Ya mere, mgbe nnukwu ihe ịga nke ọma nke akụkọ oge a gasịrị, ọ ga-ekwe omume ichere nke abụọ.
N'ezie, a tụrụ anya ya ka anyị kwuru okwu nke ọma, mana ihe nwere ike ọ masịghị anyị ọnụ ọgụgụ ka ukwuu bụ na Duke nke Hastings agaghị anọ na-echere ogologo oge nke abụọ. Ee, ọ bụ otu nzu na aja ọzọ, yabụ na anyị amatabeghị etu ihe niile a ga-esi metụta ihe ịga nke ọma nke akụkụ nke abụọ, nke bidoro ịgba egbe.
1 Kedu ka oge nke abụọ nke usoro Netflix ga-adị
2 Kedu mgbe Bridgerton oge 2 ga-apụta?
3 Ọhụrụ ihu na Bridgerton?
4 Banye na Duke
Kedu ka oge nke abụọ nke usoro Netflix ga-adị
Na-enweghị ịbanye n'ime ndị na-apụnara mmadụ ihe, anyị doro anya na otu n'ime isi ihe nhịahụ nke mere ka anyị nwee mmasị na oge mbụ bụ akụkọ ịhụnanya. Duke na Daphne nwere ịhụnanya zuru oke ma kwatuo ihe mgbochi ụfọdụ iji nwee ọnụ.. Ha chere ọtụtụ nsogbu ihu, gụnyere otu n'ime ha ịmụ ụmụ. Mana anyi agaghi aga n'ihu n’ihu ihe ọ bụla, maka ndị niile na-ahụbeghị ya.
Maka oge ahụ, anyị bụ ndị mere otú ahụ, anyị ritere uru site n'ịmara otú akụkọ ọma a ga-esi gaa n'ihu, ma ọ dị ka ọ gaghị adị otú ahụ. Oge ọhụrụ ahụ agaghị abụ nke nke mbụ, mana ọ ga-elekwasị anya ugbu a na ndị ọzọ nọ na Bridgerton na ọ ga-abụ nwanne nwoke okenye. N'ihi na dị ka ị maara n'ezie, ha metụtara akwụkwọ. Yabụ, anyị ga-ahụ otu anyị si emegharị ka nwaada Daphne ghara ịsụ ude maka Duke ya na nke ọzọ. Ọ dị ka Anthony ọ ga-eweghara ọrụ onye ndu ahụ ma mee ka anyị nwee ọ newụ ọhụụ na akụkọ ọhụụ ma ọ bụ ihe nzuzo.
Kedu mgbe Bridgerton oge 2 ga-apụta?
Oge erubeghị ịkọ maka mgbe oge Bridgerton 2 ga-apụta. Ebe ọ bụ na eserese ya amalitela n'oge opupu ihe ubi a. Anyị maara otú gbagwojuru anya na ọ bụ mgbe ụfọdụ gbaa a akụkọ nke a caliber, n'ihi na nke ji n’aka na rue na ngwụcha afọ a 2021 ma ọ bụ ikekwe mbido 2022, anyị agaghị enwe oke ozi ọma n’etiti aka anyị abụọ. Eeh, a na-eche ya nke ọma mana nke a ga-enye anyị oge iji tụlee na otu n'ime ndị isi na-akwado ya agakwaghị anọ na eserese vidiyo na na ntọhapụ ya n'ọdịnihu.
Ọhụrụ ihu na Bridgerton?
Ọ dị ka ndụ n'onwe ya, ụfọdụ na-ahapụ ndị ọzọ ahapụ n'ike. Na Bridgerton, ọ gaghị adị iche. Ebe ọ bụ na Regé Jean-Page adịghị na nkedo ahụ, Simon Ashley bịarutere. Ọ dị ka nke a ga-abụ ịhụnanya ọhụrụ nke Anthony, ya bụ, nwa mbụ n’ezinụlọ. N'ezie, ọ dị ka akụkọ a na-abịa na ọtụtụ mmetụta na mmekọrịta ịhụnanya, yana ike. Mana ọ bụ eziokwu na ejije na-abịakwa dịka ọ na-adịtụbeghị mbụ. Ihe karịrị ihe mgbawa na-agbawa agbawa na-eme ka anyị chọọ karịa maka ntakịrị nyocha. A na-eche na ndị ọzọ fọdụrụnụ, nke ezinụlọ kachasị mma, ga-eso anyị nọrọ otu oge ọzọ. Mana ọ bụ eziokwu na iji jide n'aka kpamkpam, anyị ka ga na-eche.
Banye na Duke
Ee, anyị na-ekwusi ike ọtụtụ, mana ọ bụ na ọ bụ ya bụ onye isi ya na dịka nke a anaghị emekarị na usoro ihe ịga nke ọma, netwọkụ mmekọrịta na-echigharịkwuru onye na-eme ihe nkiri. Yabụ, na Instagram anyị ahụla ka Duke n'onwe ya si sị ya nwee ọganiihu, ruo ugbu a. Ọ dị ka ọ bụ naanị maka otu oge ka ọ dị otu a, ọ gaghị anọgide na-abụ akụkụ, mana ọ nwere okwu ọma mgbe niile maka ndị otu ya na nnukwu ọrụ nke nyere ya mba ụwa. Ga-achọ ka ọ bụrụ na oge nke abụọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ndị Bridgerton: Oge Abụọ Abụọ Ejirila!
Etu esi eme ahihia Dumbbell nke oma